>polar bears in love | MoeMaKa Burmese News & Media
ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၀၉
အအေးပိုင်းဒေသ ၀က်ဝံ ၂ ကောင် ဂျာမဏီနိုင်ငံ Zoom Erlebniswelt တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင် စတင် ဆုံဆည်းကြသည့် မြင်ကွင်း။
၀က်ဝံထီး Bill နှင့် သူ၏ ရင်ခွင်အတွင်း တိုးဝင်နေသော ၀က်ဝံမ Lara တို့ကို သောကြာနေ့က အထက်ပါပုံအတိုင်း တွေ့ရသည်။ Bill သည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ Bruenn တိရိစ္ဆာန်ရုံမှ ရွှေ့ပြောင်းလာသူဖြစ်သည်။
Polar bears Bill, right, and Lara react, at their first meeting, at the Zoom Erlebniswelt zoo, in Gelsenkirchen, Germany, Friday, April 17, 2009. Polar bear Bill came from the zoo in Bruenn, Czech Republic, asanew partner for female polar bear Lara. (AP Photo/Martin Meissner)
>Burmese Kids in LA learn to speak, read &amp; write Burmese for 1 year
>Zay Hmine - March Issues
သစ်ကောင်းအိမ် - သက်ကယ်ရိတ်ဖုို့ သွားခဲ့တယ်